ဘယ်အချိန်မှာငါရဲကိုခေါ်သင့်ပါတယ်? | USAHello | USAHello
အရေးပေါ်လည်းမရှိတဲ့အခါဘာလုပ်ရမှန်းသိရန်ကောင်းလှ၏. ရဲကိုခေါ်မှလာသောအခါသူတို့သည် သိ. အရေးကြီးပါတယ်. သငျသညျရဲမခေါ်တဲ့အခါမှာ, သင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ပေးကူညီခြင်းနှင့်လည်းကောင်းတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. သငျသညျခေါ်ဆိုမှုအားဖြင့် USA တွင်မဆိုအရပ်ဌာန၌မဆိုဖုန်းမှရဲခေါ်နိုင်ပါတယ် 911.
တစ်ဦးကရာဇဝတ်မှု, တိုးတက်မှုအတွက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, ထိုကဲ့သို့သောသူခိုးသို့မဟုတ်ဖောက်ထွင်းအဖြစ်
တစ်ဦးကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေ, ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်, မထိန်းချုပ်သွေးထွက်, သို့မဟုတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှု
အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ကိုက်မှတဆင့်လှည့်လည်တစ်စုံတစ်ဦးက - ဤပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအိမျသို့ချိုးဖို့ကြိုးစားနေသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ကားတစ်စီးတံခါးများဖွင့်လှစ်ဖို့ကြိုးစားနေတစ်စုံတစ်ဦးက - ဤပုဂ္ဂိုလ်ကားကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားနေသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်
သံသယဖြစ်ဖွယ်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သောအခါတစ်စုံတစ်ဦးပြီးသားရဲကိုခေါ်ထားပါတယ်မယူဆပါနဲ့. ပြည်သူ့အန်တရာယျသို့မဟုတ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကိုကြောက်ရွံ့ရဲခေါ်ခြင်းတှနျ့ဆုတျ. သို့သော်, ရဲမှုခင်းတားဆီးကူညီပေးလို.
ရဲခေါ်ခြင်း, နာရီမျက်နှာပြင် 911. အေးဆေးတည်ငြိမ်ရှိနေဆဲတောင်းဆိုလာသောအခါသင်၏နာမကိုပေး, လိပ်စာ, နှင့်ဖုန်းနံပါတ်. သင်တစ်ဦးဆဲလ်ဖုန်းသုံးပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သင့်ထံမှတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ပြည်နယ်နှင့်မြို့သည်. ထိုအခါသင်သည်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အဘယ်ကြောင့်လူတစ်ဦးကိုပြောပြ. သငျသညျပေးထားကြသည်ဆိုညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ. ဥပမာ, အဆိုပါ dispatch ဟုပြောစေခြင်းငှါ,, “လိုင်းပေါ်နေပါ,” သို့မဟုတ် “အဆောက်အဦးချန်ထားပါ။”
သငျသညျ dial အကယ်. 911 အမှားကြောင့်, စေနိုင်ခြင်းကြောင့်အတက်ဆွဲထားကြဘူး 911 အရာရှိများအရေးပေါ်တကယ်တည်ရှိကြောင်းထင်. အဲဒီအစားကိုယ့်ကိုသင်အမှားဖြင့်သမုတ်သောသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားပြော.
အများစုမှာအမေရိကန်ရဲများကဌာနဆိုင်ရာတစ်ဦးဆက်သွယ်ရေးအလယ်ဗဟိုရှိ. အဆိုပါဆက်သွယ်ရေးအလယ်ဗဟိုဝန်ထမ်းမိမိတို့၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ရေဒီယိုအပေါ်ရဲအရာရှိများရောက်ရှိ. တစ်ဦးချင်းစီရဲအရာရှိများလည်းဟက်ဆက်များသယ်ဆောင်, နားကြပ်နဲ့တူ. ရဲတပ်ဖွဲ့ကားများကွန်ယက်ချိတ်ဆက်တဲ့ကွန်ပျူတာရှိ. အဆိုပါကွန်ပျူတာမော်တော်ယာဉ်သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုရန်သူတို့ကိုခွင့်ပြု, ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းများ, နှင့်အခြားအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များ.
ဥပဒေဘက်တော်သားအရာရှိ, သို့မဟုတ်ရဲအရာရှိများ, ၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်ဖို့သူတို့ကို enable လုပ်ဖို့အချို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားကြသည်. သူတို့ကကျယ်ပြန့်-အထိတာဝနျမြားရှိ.
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးလေးနက်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်လည်းမရှိသည့်အခါ, အရာရှိတစ်ဦးကလူတစ်ဦးလက်ထိတ်ခတ်ခြင်းနှင့်ဖမ်းနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါဥပဒေစိုးမိုးရေး၏အင်အားကြီးပုံမှန်အားဖြင့်သာတရားမပျက်ခဲ့ပြီးတစ်ဦးသံသယဖော်ထုတ်နှင့်ဖမ်းမိရမည်ဖြစ်သည်ရှိရာကိစ္စများတွင်ပြဌာန်းထားပါသည်. ပြစ်မှုဖောက်ထွင်းပါဝင်သည်, မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူး, လူသတ်မှု, နှင့်လုယက်မှု. အဆိုပါအထိန်းသိမ်းခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးရဲစခန်းခေါ်သွားတစ်ခုသို့မဟုတ်အာမခံပေါ် မူတည်. ထောင်ချလိမ့်မည်.
ရဲအရာရှိများအထဲကလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း policing ကြသောအခါ, ၎င်းတို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအမိန့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပါပဲ. သူတို့အလုပ်သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများနှောက်ယှက်မယ်ထားတဲ့အပြုအမူတွေကိုတားဆီးပါဝငျ. ကာကွယ်တားဆီးရေးအသံကျယ်ဂီတကစားရပ်တန့်ဖို့ရန်ပွဲအတွက်ကွားထဲကနေလာနေကြပါတယ်. ဤအမှုကိစ္စများတွင်အခွအေနသမ္မာသတိနှင့်အတူထက်ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ကိုင်တွယ်နေသည်. သို့သော်, ဤအခွအေနမြေားပညတ္တိကျမ်းကိုခြိုးဖောကျနိုငျသောအခါသာဓကရှိစေခြင်းငှါ,.
ပထမဦးဆုံးအကူအညီပေး, မော်တော်ယာဉ်အကူအညီ, ခရီးသွားဧည့်သတင်းအချက်အလက်, နှင့်အများပြည်သူပညာရေး
ရဲတပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီများမရရှိနိုင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးများမှာ, 24 နာရီတစ်ရက်, နိုင်ငံသားများမဟုတ်တဲ့အခါမှသာဒုက္ခပေမယ့်သည့်အခါအဆင်မပြေအခြေအနေများထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာရဲဌာနကိုပဌနာဒါ. ရလဒ်အနေဖြင့်, ရဲတပ်ဖွဲ့ကန်ဆောင်မှုယာဉ်ကိုအံဝင်ခွင်ကျနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကျော်လွန်သွားပါ, အခြားအေဂျင်စီများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေး, နှင့်ပျောက်ဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုနေရာချထားကူညီခြင်း.
ဥပဒေစိုးမိုးရေးပညတ္တိကျမ်းတရားရုံးများနှင့်ပြင်ဆင်ချက်များမှာအမေရိကန်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှု system.The အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏သုံးပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် (ပြစ်ဒဏ်နှင့်အကျဉ်းထောင်များ). ဥပဒေဘက်တော်သားအများအပြားအစိုးရအေဂျင်စီများအားဖြင့် run နေပါသည်. ကွဲပြားခြားနားသောအေဂျင်စီများပြစ်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်. အေဂျင်စီများသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောမျိုးရှိပါတယ်:
တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဖက်ဒရယ်နည်းလမ်းများ, နှင့်ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများအားလုံးယူအက်စ်အေကျော်ပညတ္တိကျမ်းပြဋ္ဌာန်းရန်ဖို့အခွင့်အာဏာရှိ. တရားရေးဦးစီးဌာနဖက်ဒရယ်အဆင့်ကိုမှာတရားတာဝန်ရှိသည်. အခြားအေဂျင်စီများစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ဖက်ဒရယ်ဗျူရိုပါဝင်သည် (FBI က), အဆိုပါမူးယစ်ဆေးစတင်အာဏာတည်အုပ်ချုပ်ရေး (DEA), အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Marshals Service, နှင့်အခြားသူများအကြားအကျဉ်းထောင်များ၏ဖက်ဒရယ်ဗျူရို.
ပြည်နယ်အေဂျင်စီများကသူတို့ပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီးဥပဒေစိုးမိုးရေးန်ဆောင်မှုများပေး. ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်ပြည်နယ်ကင်းလှည့်တို့ပါဝင်သည် - သူတို့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကင်းလှည့်ဟုခေါ်တွင်စေခြင်းငှါ. ကက်ပီတောလ်ရဲကို, ကျောင်းကကျောင်းဝင်းရဲတပ်ဖွဲ့, နှင့်ဆေးရုံရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်အေဂျင်စီအောက်မှာလည်ပတ်အခြားအခက်များဖြစ်ကြ၏.
မြို့ရွာနှင့်မြို့ကြီးများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနရှိ. သူတို့ကဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန်ပြည်နယ်ဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်. အကြီးမားဆုံးမြို့ကြီးများရဲအရာရှိထောင်ပေါင်းများစွာ၏နဲ့အတူအလွန်ကြီးမားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနရှိစေခြင်းငှါ. အသေးစားမြို့ရွာအနည်းငယ်အရာရှိတွေရှိစေခြင်းငှါ.
သတင်းအချက်အလက်များလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှမကြာခဏမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.